जेठ १३ गतेदेखि २४ गतेसम्म सञ्चालन हुने SEE परीक्षा के हुन्छ अव ? - जलजला अनलाईन
जलजला अनलाईनप्रकाशित मिति: २०७८ बैशाख २०, सोमबार (१ महिना अघि)
जेठ १३ गतेदेखि २४ गतेसम्म सञ्चालन हुने SEE परीक्षा के हुन्छ अव ?
काठमाडौँ, २०-बैशाख, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले २०७७ को माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) आगामी जेठ १३ गतेदेखि २४ गतेसम्म सञ्चालन गर्नेगरी कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ। करिब पाँच लाख विद्यार्थीले एसइई परीक्षा दिनलाई तयार भएर बसेका छन्। यसरी कोभिड तीव्ररूपमा फैलिरहँदा अब परीक्षा के होला भन्दै परीक्षार्थीहरू चिन्तित बनेका छन्।
राष्ट्रिय परीक्षा ​बोर्डका अध्यक्ष प्राडा चन्द्रमणि पौडेलले यो महिनाभर कोरोना संक्रमण दरको अवस्था हेरेर मात्रै एसइई परीक्षाबारे निर्णय लिन सकिने बताएका छन् । सरकारले २०७६ सालको एसइईको नतिजा कोरोनाकै कारण आन्तरिक मूल्यांकनबाट प्रकाशित गरेको थियो। तर, २०७७ को एसइई परीक्षा भने आन्तरिक मूल्यांकनबाट गर्ने अहिलेसम्म कुनै योजना नबनाएको उनले प्रष्ट पारेका छन् ।
यता त्रिभुवन विश्वविद्यालयले जारी स्नातक तह दोस्रो वर्षको परीक्षा सहित स्नातकोत्तर तहका परीक्षा पनि स्थगित गरेको छ । अन्य विश्वविद्यालयले पनि स्थगित गरेका छन् । त्रिविका अनुसार प्रथम वर्षको मानविकी, शिक्षा, व्यवस्थापनलगायत संकायको वार्षिक परीक्षा रोकिएको छ। त्यस्तै, कक्षा–८ परीक्षा पनि रोकिएको छ।